Tsara ve ny bisikileta avy any Halfords? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Bisikileta Halford - ahoana no hamahana azy
Bisikileta Halford - ahoana no hamahana azy
Tsara ve ny bisikileta avy any Halfords?
Notsofin-trondro niaraka tamin'ilay takelaka niavaka izahay ary vao mainka nampiaiky volana anay ny fomba fitantanana tsy misy kilema atolotra. Raha tsorina, dia tena izybisikileta mahafinaritraamin'ny vidiny mahafinaritra. Nahazo isa ambony hafabisikiletaavy amin'nyHalfordsfivarotana gorodona dia ny Incline Alpha avy an-trano marika 13bisikileta.
Neil Donoghue: Androany aho mitady bisikileta an-tendrombohitra mora vidy. Mitady bisikilety an-tendrombohitra aho izao. Zavatra tsy dia antitra loatra ary tsy reraka loatra.
Te-hahita varotra tena izy izay vonona handeha aho. Voalohany indrindra, tena manampy ny fahalalana ny tsena, manana hevitra tsara ny vidin'ny bisikileta, tena mendrika hatao any amin'ny magazay, mijery an-tserasera Eto amin'ity lahatsoratra ity, manandrana mitady varotra tena izy aho, ka mila mandavaka lalindalina kokoa amin'ny loharano hafa. Raha te hahita bisikileta mora sy tena an-tendrombohitra aho dia tsy mijery afa-tsy amin'ny sarotra satria mora vidy indrindra izy ireo ary koa mety hitrangan'ny mpitroka hatairana tampoka amin'ny tadin-damosina any aoriana na maloto.
Izaho koa mila zavatra azoko havaozina amin'ny ho avy raha zakako izany. Zavatra tsy dia antitra loatra satria miova ny zavatra toy ny fenitra sy ny habe. Mila zavatra vaovao vaovao aho ary zavatra haiko amin'ny ho avy, zavatra toy ny frein, kodiarana n nantona.
Andao hojerentsika ny fomba ahitanao bisikileta amidy. Voalohany dia lazaiko fa raha ny tena izy dia ho hitanao eo an-toerana izany. Na aiza na aiza no itodihanao, amin'ny eBay, an-tserasera, amin'ny sokajy, satria raha ny tokony ho izy dia te hijery ilay bisikileta ianao.
Efa nandre momba ny eBay ve ianao? Bisikileta an-jatony, bisikileta an'arivony amin'ny eBay. Toerana lafo lafo amidy izy ity, koa mieritreritra hanao lavanty hafa na classifieds amin'ny Internet aho. Malaza indray.
Inona no hataoko? tianao amin'ny eBay ve ianao? Mitadiava zavatra tena ankapobeny. Rehefa manao bisikileta an-tendrombohitra aho dia ataovy ny fikarohana dia manomboka manivana kely kokoa azy aho. Mieritreritra aho fa afaka mahita tolotra varotra eto ianao.
Avy eo aho dia nandahatra azy tamin'ny voalohany indrindra. Heveriko fa zava-dehibe tokoa ny ora andavanandronao ataonao. Raha mitady fotoana tsy ampoizina ianao rehefa vitsy ny olona manodidina anao, dia mety hahita ny tambim-bola ianao.
Rehefa mifarana ny harivariva, dia misy vintana lehibe kokoa hisy ny olona an-tserasera afaka mangataka izany. Amin'izao fotoana izao dia PM roa eto UK, mitady bisikileta roa aho ary avy eo manana efatra minitra. Misy Carrera Banshee, £ 280, tsy ratsy amin'ny bisikileta fampiatoana, A Trek Fuel EX 6, £ 530.11 minitra Misy didy 17 tavela, izay malaza be.
Ny iray amin'ireo zavatra tsara momba ny eBay dia ny fananana sivana maro. Raha te-hanivana arakaraka ny haben'ny kodiarana ianao, ny haben'ny zoro, ny halaviran'ny tranonao, satria toa ny nolazaiko, rehefa mahita ny bisikileta ianao? , ity dia afaka manome anao fampahalalana bebe kokoa noho ny mijery sary vitsivitsy amin'ny Internet fotsiny. EBay tokoa dia fotoana iray hiketrehana bisikileta be dia be.
Mety heveriko fa hanao fikarohana kely amin'ny fotoana samihafa isan'andro koa. Rehefa mahita bisikileta tena tianao ianao, dia hikapoka ny mpivarotra aho ary hanomboka hikaroka ireo zavatra novidinao taloha. Mety hanome anao fanazavana sasany momba ny maha ara-dalàna an'ity mpivarotra ity izany.
Mandehana any amin'ny safidy manaraka, Gumtree. Angamba ny ampahany tsara indrindra amin'izany dia ny eo an-toerana kokoa ka ahitanao ny tanàna misy anao. Ary indray, mora kokoa ny mahita zavatra ho hitanao.
Heveriko fa ny fatiantoka lehibe indrindra amin'i Gumtree dia ny fantatry ny be sy ny be amin'ny fananana bisikileta nangalarina sy fananana halatra maro ao. Mazava ho azy fa tsy ny zavatra rehetra no angalarina any, fa ny mora kokoa ho an'ny olona ny mametraka ny zavatra amidy ary mijanona ho tsy fantatra anarana, dia mora kokoa amin'ny olona ny mivarotra zavatra halatra. Mandefasa fanontaniana amin'ny olona mivarotra azy.
Ny bisikileta tena mora vidy fotsiny dia mitady bisikileta an-tendrombohitra indray ka azo lazaina hoe manankery. Zavatra manintona ny masoko ity Rocky Mountain ity. Ity no Rocky Mountain Vertex.
Any Bristol, 13 kilaometatra miala ny misy ahy izao. Toa antitra kely izy. Ataoko angamba fa 2008, 2009 izany.
Manana kodiarana 27.5 izy io. Manana fampahalalana marim-pototra eto izy ka misy zavatra tokony hatao.
Tsy 26 izany ka tsy mety antitra loatra. Ny vidiny dia 225 £ fotsiny. Toa varim-bola izany.
Hanao lisitra fifantina aho. Safidy iray hafa tokony hijerena ny mitady fivarotana bisikileta na koa fikambanana mpanao asa soa any amin'ny faritra misy anao izay mivarotra bisikileta nohavaozina. Ankehitriny dia mety ho mendri-piderana izy ireo ary tena niasa tamin'ny fanamarinana fa vonona ny hitondra bisikileta ary afaka mahazo antoka miaraka amin'izy ireo koa ianao.
Ny olana amin'izany dia mety tsy maintsy manomboka manivana zavatra ianao na mitady passageways ary zavatra maro samy hafa amidy. Ny ampahany amin'ny bisikileta efa niasa sy ny karazana bisikileta rehetra dia toa teo amin'ny faran'ny ony, saingy mety hahita varotra eto ianao raha manam-potoana hijerena ny zavatra hafa rehetra. Averina indray, ny loza mety hitranga amin'ny Facebook dia ny fametrahana ireo bisikileta amidy mora foana ka ahitanao bisikileta misy voany.
Nahita bisikileta teto aho taloha, ny sasany bisikileta mihazakazaka. Azonao atokisana ve ny bisikileta an-tendrombohitra hafa? Eny, tiako ny hieritreritra an'izany, saingy tsy misy azo antoka. Pinkbike Classifieds dia mety hahita bisikileta tena izy, izay mahatonga azy ireo ho lafo kokoa.
Raha manana teti-bola lehibe kokoa ianao, ity dia mety toerana tsara hijerena, saingy mety hahita varotra lafo vidy ihany. Andao jerena kely. Cannondale M400, ary bisikileta Retro ity.
Na tsy izany aza dia mbola azonao atao ny manatsara ny bisikileta sy ny zavatra. Toa tena amin'ny endriny tena tsara. Izy io koa dia misy antsipiriany be dia be izay manampy ahy hahafantatra fa ny olona mitanisa an'io dia mahalala zavatra momba ny bisikileta an-tendrombohitra.
Heveriko fa mety hahitanao an'ity amin'ny tranokala bisikileta manam-pahaizana toy ny Pinkbike Search ary ireo vaovao ireo dia manodidina ny £ 650 ka tsy fivarotana lehibe fa mora vidy ary antsoina ho misokatra amin'ny fifanarahana mirary izany heveriko fa ho ataovy amin'ny lisitra fohy koa ity. Ao amin'ny lisitra fohy dia Rocky Mountain Vertex. Tena tiako ny endrik'ity bisikileta ity.
Somary hafakely ihany koa io. Zavatra avy any British Columbia na rockhopper manam-pahaizana manokana, £ 400. Ny Rocky Mountain dia 225 izay somary tambim-bidy, fa ilay rockhopper, bisikileta azo itokisana kokoa io.
Ahoana ny amin'ireo fambara raha halatra ny bisikileta? Eny, raha toa tsara loatra ilay izy ka tsy marina dia mety izany. Raha mora loatra io bisikileta io dia azo antoka fa misy lakolosy fanairana maneno, mety hanandrana manala azy ireo izany olona izany ary ohatrinona ny antsipiriany ao amin'ilay doka. Mety manandrana mitazona azy io somary manjavozavo izy ireo satria raha nisy nangalatra ny bisikiletin'olona ary nanomboka nitady ireo andinindininy ireo izy dia afaka miseho.
Raha toa izy ireo milaza fa bisikileta an-tendrombohitra fotsiny, dia Rocky Mountain, ary tsy misy zavatra toa ny habe na taona na ny singa rehetra ao, heveriko fa mety hangalatra izany. Ny zavatra hataoko dia ny Google mikaroka ity bisikileta ity. Raha Rocky Mountain Vertex ST3 io dia misy antsipiriany kely ary avy eo nangalarina teo akaikiny, jereo raha misy miakatra, ny sarin'io bisikileta io.
Raha misy mangalatra ny bisikiletany tsara tarehy dia azo inoana fa farafaharatsiny nalefany tao amin'ny tambajotran-tserasera na tany amin'ny Internet. Hamariko izany avy hatrany. Raha azonao atao ny maka ny laharan-kazo na ny sarin'ilay isa izay manampy anao.
Raha toa ka simba na simba amin'ny fomba rehetra dia aza mividy azy fotsiny. Midika izany fa misy olona manandrana manafina ny mombamomba ity bisikileta ity. Any UK dia misy loharano toy ny BikeRegister na afaka manangona ny bisikiletanao amin'ny polisy ianao.
Amin'ny ankapobeny dia manao an'ity serivisy ity ianao amin'ny fametrahana apiraikitra kely ary manisy marika ny bisikileta. Azo antoka fa zavatra azon'ny olona atao izany raha matahotra izy ireo fa ho nangalarina ny bisikiletany, saingy azonao atao ihany koa ny mivoaka amin'ny afobe raha toa ka ao anaty lisitry ny bisikileta halatra izany bisikileta izany. Ankehitriny, raha anao ny fahaliananao amin'ny bisikileta, fotoana tokony hametrahana fanontaniana vitsivitsy amin'ny mpivarotra.
Mety te hiaro tena ny olona rehefa manana bisikileta roa na bisikileta vaovao izy ireo ary tsy tian'izy ireo hiseho fotsiny ny olona ary hahita izay tena tsy hosoratako fotsiny satria tsy tian'izy ireo hanaraka anao izy ireo Hody an-trano, fa bisikileta maro no nangalarina, lasa fotsiny ary lasa teo amin'ny toerana fijanonan'ny fiara. Mitandrema kely amin'izay ahitanao azy ireo hividianana ny bisikileta. Raha te hividy bisikileta an-tserasera fotsiny ianao amin'ny sary raha tsy te-hanolo-tena ianao dia mbola hijery an'io amin'ny antsipiriany araka izay azo atao.
Zahao ireo singa ao amin'ilay bisikileta. Misy zavatra toa somary maloka ve any sa misy angamba somary antitra ka soloina? Atombohy ny mampiditra an'io amin'ny vidin'ny bisikileta eo amin'ny toerana voalohany, ankehitriny raha mijery ity Rocky Mountain Vertex ity ianao dia any Bristol, £ 225 ka mora be. Misy fambara fampitandremana kely ho ahy.
Voasariky ny paositry ny seza. Toa tafahitsoka tao anaty bisikileta izy io ary misy olona tena mila manily izany mba hahafahany mihetsika. Angamba ity bisikileta ity koa tsy mbola voakarakara.
Iray volana latsaka izao no namoaka tao amin'ny Gumtree ity olona ity. Misy fambara fampitandremana vitsivitsy saingy mieritreritra aho fa handefa hafatra an'ity olona ity ary hametraka fanontaniana vitsivitsy. Jereo hoe inona ny valiny azoko sy izay tiako.
Milaza fa mandeha tsara ny zava-drehetra, tena be fifehezana, efa kilaometatra vitsivitsy no nanarona azy, tsara ho ahy ireo fitaovana izay toa ara-dalàna. Any Bristol koa io. Angamba hijery bisikileta roa aho.
Nandeha antsasak'adiny latsaka. The Rocky Mountain, tsy nifandray tamiko mihitsy io tovolahy io ka somary miahiahy momba ilay bisikileta aho amin'izao fotoana izao fa tsenan'ny mpivarotra tokoa. Raha te hivarotra bisikileta ianao dia tian'ny olona.
Rehefa mahita zavatra tianao ianao dia mila mihetsika haingana be. Soa ihany fa vitako tamin'ny bisikileta ity. Nahazo hoodoo voodoo aho.
Vao nanomboka bisikileta an-tendrombohitra ilay tovolahy, nividy ity bisikileta ity, nanapa-kevitra fa tiany izany ary nanapa-kevitra faingana hifamadika amin'ny bisikileta fampiatoana tanteraka. Toa madio io. Vovoka kely io.
Soa ihany fa nanana maina tokoa isika tamin'ny volana lasa tany Angletera ka tsy toa tena nahita fotaka be ianao, vovoka kely fotsiny. Voodoo ity. Marika UK ity.
Na izany aza, mivarotra bisikileta tsara ihany koa izy ireo ary ity dia iray amin'ireo bisikileta marika misy azy ireo. Tena gaga aho. Ity bisikileta ity dia mety ho vaovao tamin'ny £ 600.
Manana tahony 50 mil izy. Manana iray avy any SETA izy io. Izy io dia manana drivetrain Shimano Deore ary M935, heveriko fa nantsoina izy ireo, freins kely mora kokoa izy ireo.
1x10 ihany io ka mety ho zavatra azoko hatsaraina amin'ny ho avy satria miaraka amin'ny fanampian'i Doddy avy amin'ny GMBN Tech aho, hanao asa kely amin'ity bisikileta ity aho ary hijery izay azoko havaozina eo akaikiny. Ny zavatra tsikaritro, zavatra tena mahafinaritra momba azy io, misy ny iray amin'ireny - misy lavaka ho an'ny paosin-dranon-drindrina ao anatiny raha te-hametraka iray ianao satria tokana tokana ihany no misy azy io. Misy zavatra roa azoko atao amin'ity bisikileta ity fa faly aho, 375 £.
Mba hampisehoana fotsiny fa afaka mividy bisikileta an-tendrombohitra mety ianao mba hitondra tena fa tsy vola be. Misy lahatsoratra misy torohevitra vitsivitsy momba ny fomba hividianana bisikileta mora vidy. Raha manana torohevitra hafa ianao dia aza hadino ny mamela azy ireo amin'ireo hevitra etsy ambany.
Ampio ireo mpijery namana. Angamba misy ny tsy azoko tao. Ankehitriny manana bisikileta tsara aho.
Hanao zavatra kely amin'izany aho. Ajanony tsy hijery ny masonao, ity bisikileta ity dia hiseho betsaka kokoa amin'ny GMBN Tech. Tena te hitondra ity bisikileta ity miaraka amiko aho mandritra ny dia roa.
Azonao atao ve ny mifanakalo amin'ny bisikiletanao taloha ao Halfords?
Raha ianaoNahazoantitraFokobisikiletafaianareotsy mampiasa intsony naianaomitady hanatsara nynymaodely vaovao,afaka ataontsikaVonjeo!Afaka mifanakalo amin'ny antitra ianaoFokobisikiletaamin'nyfifanakalozanHO AN'NYa Halfordskaratra fanomezana azo avotana amin'ny rehetraHalfordsvokatra sy serivisy, ao anatin'izany ny faritra marony bisikileta.iraika ambin'ny folo . 2021.
rantsan-tànana mikasika ny fanazaran-tena
Mivarotra bisikileta goavambe ve i Halfords?
HalfordsValiny noraisin'ny UK tamin'ny fidirana amin'ny Cube,goavam-beary Manokana. REDDITCH, UK UK lehibe indrindrabisikiletany mpivarotra dia manitatra ny fanitarana ny fivezivezeny amin'ny Internet ary nahazo fidirana tamin'ny alàlan'ny fahazoana azy vaovao amin'ny marika premium toa an'i Cube,goavam-beary Manokana.26 2016.
Ratsy ve ny bisikileta Halfords?
Bisikiletadia mafy orina nefa izy ireomahatsiravinaamin'ny fananganana sy fanompoana. nitondra ny ahy ho an'ny asa fanompoana mandritra ny 6 herinandro, niverina niaraka tamin'ny fipetrahan'ny seza ary samy tsy mandeha ny frein. efa namaha ny tadiny mba hanitsiana tariby dia hadinony ny manenjana azy ireo. asa tsara fa nanandrana azy tao amin'ny magazay aho talohan'ny nivoahako.04.30.2018
Sahirana ara-bola ve i Halfords?
Mihena ny tombom-barotraHalfords
Mpivarotra bisikileta anglisy sy faritraHalfordsdia nitatitra ny fihenan'ny 18% ny tombom-barotra isan-taona ka hatramin'ny? 58.8m avy amin'ny? 71.6m. Ny orinasa dia nanome tsiny ny fahatokisan'ny mpanjifa malemy, ny toetr'andro tsy manampy ary ny fampiasam-bola amin'ny orinasa.
Mividy bisikileta efa niasa ve i Halfords?
Tao anatin'ny efa-taona lasa dia nandefa 30.000 izahaybisikiletaamin'ny antony mendrika. rehetrabisikiletaizany dia amin'ny toe-javatra mety, anisan'izany ny ankizybisikileta, dia ho ekena raha toa ka feno tsy misy triatra ao anaty rindrina ary tsy harafesina 25% izy ireo. Raha te hahalala bebe kokoa ny fitsidihanaHalfords. miaraka.8 2017.
Afaka mitondra bisikileta hiverina any Halfords ve ianao?
ianareodia tsy maintsyMitondràny charger, ny boky fampianarana, ny bateria key ary ny singa hafa miaraka amin'ny e-bisikileta, ary asao ny rosia na ny fanamafisana ny kaonty an-tserasera ahafahanao mahazo aMiverena.Halfordsmanan-jo handàMiverenana mifanakalo izay e-bisikiletaho an'izaymanao izany ianaotsy manana rosia na fanamafisana ny kaomandy.
Mbola mivarotra bisikileta ve i Halfords?
Ny maha-UK'snitarikabisikiletany mpivarotra dia mamela antsika hitahiry lehilahy, vehivavy ary ankizy marobebisikiletaamin'ny endrika farany. Ao anatin'ny faritra misy antsika dia hahita Boardman ianaobisikileta, Firazananabisikileta, Voodoobisikileta,bisikiletaavy any Apollo sy ny maro hafa. Amin'nyHalfords, izahay koa dia mirehareha amin'ireo zanakay isan-karazanybisikileta.
Mbola afaka mividy bisikileta amin'ny Halfords ve ianao?
Eny,iSIKAdiaNa izany azafanatitrabisikiletaserivisy.
Mifaninana ve ny bisikileta ratsy?
Tendrombohitra tsarabisikiletatokony hanome mpitaingina fampiononana lehibe. Ny zavatra niainantsika tamin'nyFokodia ny mampionona ny haavony. An'arivonybisikiletaizay tia an'ity marika ity dia naneho ny fahatokisany an'ity lafiny ity, noho ny forks vita amin'ny karbaona notohanan'ny steering steer.
Misy fivarotana Halfords any Angletera?
Ankoatr'izay, Halfords dia namelombelona indray ny fivarotana bisikileta Cycle Republic miaraka amina fivarotana marobe ankehitriny manerana an'i UK. Halfords dia mitahiry bisikileta amin'ny endriny sy habe rehetra, manomboka amin'ny bisikileta an-dàlana sy an-tendrombohitra ka hatramin'ny modely cyclocross, bisikileta BMX ary hybrida.
Ahoana ny fomba hanafarana bisikileta Halfords ho any an-trano?
Manafatra an-tserasera amin'ny fandefasana an-trano na tsindrio & amp; amp; amp; Angony ao amin'ny magazay. Tsidiho ny Halfords ho an'ny bisikileta, Sat Nav & amp; Audio, Motoring & amp; Fikojakojana fiara, fitsangantsanganana & amp; Fitaovana fitobiana, ary maro hafa. Manafatra an-tserasera amin'ny fandefasana an-trano na tsindrio & amp; Angony ao amin'ny magazay.
Maharitra hafiriana ny fanamboarana bisikileta Halfords?
Avelao i Halfords hikarakara ny zavatra ilaina amin'ny fanamboarana bisikileta sy ny filàna bisikileta amin'ny fonosana CycleCare isan-karazany. Mandoa sarany iray rehefa mividy bisikileta vaovao ianao ary ho rakofana mandritry ny telo taona amin'ny serivisy sy fanamboarana isan-karazany, ao anatin'izany ny fanitsiana valizy sy ny fitaovana tsy voafetra, fanamboarana puncture tsy voafetra, 10% amin'ny faritra rehetra ao anatin'izany ny fametahana maimaimpoana. !